I had even cried for Mohamad Ali and foolishly committedasin by protesting Allah SWT in 1967 | Dr. Abdul Rahman Zafrudin @ Ko Ko Gyi
HomeI had even cried for Mohamad Ali and foolishly committedasin by protesting Allah SWT in 1967
While watching the news of the GREATEST Mohamad Ali’s death..
I feel sad and tears welled in my eyes.
This is the second time I cry for him. The first was even worse as I was just 17 yrs old student.
In 1967, three years after winning the heavyweight title, Ali refused to be conscripted into the U.S. military, citing his religious beliefs and opposition to American involvement in the Vietnam War. He was eventually arrested and found guilty of draft evasion charges and stripped of his boxing title. Ref: Wikipedia.
[May Allah Subhana Wa T’ala forgive me for the sins I committed at that time and my whole life.]
Although I used to go to Masjid at least three timesaday as usual to perform Namaz prayers, I refused to ask doa’ even when the Imam pray the mass doa’. Astakafirlullah, I was protesting Allah Subhana Wa T’ala for bringing down the world Muslim’s greatest hero at that time.
But I have to admit that there were other two causes in addition for my sadness because I thought that Allah Subhana Wa T’ala had allowed letting down on Muslims.
In the Six-Day War , 1967 Arab–Israeli War, on June5and 10, 1967 by Israel and the neighbouring states of Egypt , Jordan, and Syria. Arabs lost which I even felt shame.
And THE LAST STRAW that broke my heart was, I lost in the competition in 1967 for the Nine Standard Outstanding Student or Luyechun examination after I got that once in 1966.
But Shukur Alhamdulillah, Mohamad was later freed, regain the Championship and became the GREATEST BOXER not only inside the boxing-ring but throughout the world .
Arabs gain back part of their dignity in The Yom Kippur War, Ramadan War in 1973. Ref: Wikipedia.
And became filthy rich with the 1973 oil crisis began in October 1973 when the members of the Organization of Arab Petroleum Exporting Countries (OAPEC, consisting of the Arab members of OPEC plus Egypt and Syria) proclaimed an oil embargo. Ref: Wikipedia
Last but not the least, Shukur Alhamdulillah, I was rewarded by Allah Subhana Wa T’ala with Outstanding Student or Luyechun for another four times. Dr Ko Ko Gyi’s WP and
Flashback : Awards I got
မိုဟာမက်အလီကအကြီးကျယ်ဆုံးသောလူတစ်ယောက်ပဲ။ ခင်ဗျားသူ့ကိုမေးမယ်ဆိုရင် သူပြောပြလိမ့်မယ်။ သူဟာနှစ်ထပ်ကွမ်းအကြီးကျယ်ဆုံးသောအောင်မြင်မှုရရှိခဲ့သူဖြစ်တယ်ဆိုတာသူပြောပြလိမ့်မယ်။ သူဟာမိုးကြိုးကိုလက်ထပ်ခတ်ပြီး လျှပ်စစ်မိုးကြိုးတွေကိုထောင်ထဲပစ်ထည့်နိုင်တဲ့သူမျိုးပဲ
ဒါပေမယ့်ကြီးကျယ်တဲ့ချန်ပီယံတစ်ယောက်ကဘာလုပ်ခဲ့တာလဲ တစ်ခြားသူတွေနဲ့ဘာတွေခြားနားနေတာလဲ လူတိုင်းအဲဒီလိုပဲပြောကြလိမ့်မယ်။
ဒီကမ္ဘာကလူအားလုံးနဲ့ထပ်တူပဲ မစ်ချယ်နဲ့ကျွန်တော် သူကွယ်လွန်ခဲ့တာအတွက်ဝမ်းနည်းမိခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်ဘုရားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးကြောင့် ကျွန်တော်တို့သူ့ကိုကောင်းကောင်းသိခွင့်ရခဲ့တယ်။ အကြီးကျယ်ဆုံးအောင်မြင်ခဲ့သူကို ကျွန်တော်တို့နှုတ်ဆက်ခွင့်ရခဲ့တာ တော်တော်ကံကောင်းပါတယ်။
ကျွန်တော်သီးသန့်လေ့လာရေးအချိန်တွေမှာ သူ့ရဲ့လက်အိတ်တစ်စုံကို သူ့ဓာတ်ပုံအောက်မှာထားပြီး ကျွန်တော်သိမ်းထားတယ်။ Sonny Liston ကိုအနိုင်ယူပြီး ခြင်္သေ့တစ်ကောင်လိုကြုံးဝါးနေတဲ့ အသက်၂၂နှစ်အရွယ်ငယ်ရွယ်တဲ့ချန်ပီယံလေးပေါ့။ကျွန်တော်အရမ်းငယ်ပြီးသိတတ်စအရွယ်မှာ ကက်စီးယက်စ်ကလေ နာမည်နဲ့ အိုလံပစ်ရွှေတံဆိပ်ဆုကို သူရပြီးနေပြီ နောက်တော့သူ့ရဲ့မွတ်စလင်တစ်ယောက် ယုံကြည်ချက်ခရီးစဉ်ကိုသူထွက်ခွာပြီး Madison Square Garden မှာပရိသတ်တွေက သူ့ရဲ့နာမည်အသစ်ကိုအော်ဟစ်အားပေးရင်းနဲ့ သူပြန်လာခဲ့တယ်။
ကျွန်တော်ဟာ အမေရိကဖြစ်တယ်လို့ သူတစ်ခါကြေငြာခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်တော်ဟာသင်တို့အသိအမှတ်အပြုလိမ့်မှာ မဟုတ်တဲ့တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းပဲ ဒါပေမယ့်ကျွန်တော်နေသား ကျနေပါပြီ လူမည်း ယုံကြည်လွန်းသူ စောင်းကြွှနေတဲ့သူ ကျွန်တော့်ကိုနာမည်ပေးပါတယ်။ ခင်ဗျားတို့နာမည် မဟုတ်ပါဘူး ကျွန်တော်ဘာသာရေးကလည်း ခင်ဗျားတို့ရဲ့အရာမဟုတ်ဘူး ကျွန်တော့်ရဲ့ရည်မှန်းချက်က ကျွန်တော်ပဲ ကျွန်တော်နဲ့နေသားကျနေပါပြီ။
ကျွန်တော်အရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါမှာ ကျွန်တော်သိခဲ့တဲ့အလီပဲ လက်ဝှေ့ကြိုးဝိုင်းထဲက ဖိုက်တာတစ်ယောက်ဖြစ်ပေမယ့်လည်း ကဗျာဆရာတစ်ယောက်ရဲ့အရည်အချင်းရှိတယ်။ ဒါပေမယ့်သူဟာမှန်ကန်တဲ့အရာအတွက် တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့သူပဲ။ ကျွန်တော်တို့အတွက် တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့သူ သူဟာ King နဲ့ Mandela တို့နဲ့အတူရပ်တည်ခဲ့တယ်။ တစ်ခြားသူတွေမပြောထွက်တဲ့ခက်ခဲတဲ့အရာတွေပေါ်မှာ သူရပ်တည်ပြီးပြောဆိုခဲ့တယ်။ သူ့ရဲ့ချန်ပီယံဘွဲ့ကိုထိခိုက်စေမဲ့ ပြင်ပလက်ဝှေ့ကြိုးဝိုင်းထဲမှာလည်း သူတိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တယ်။ သူ့ရဲ့ဘယ်ညာမှာ ရန်သူတွေတိုးပွားလာစေကာ ပုတ်ခတ်ဝေဖန်ကြပြီး ထောင်ထဲပို့ဖို့ထိလုပ်ခဲ့ကြတယ်။ဒါပေမယ့် အလီဟာကိုယ့်ဘာသာကိုယ်ရပ်တည်နိုင်ခဲ့တယ်။ သူ့ရဲ့အောင်မြင်မှုဟာ ဒီကနေ့အမေရိကကိုထင်ရှားစေတဲ့နေရာမှာ အကူအညီရစေခဲ့ပါတယ်။
ဒါပေါ့ သူကမပြီးပြည့်စုံပါဘူး လက်ဝှေ့ကြိုးဝိုင်းထဲကသူ့ရဲ့မှော်ဆန်တဲ့ထိုးချက်အပြင် သူ့ရဲ့စကားလုံးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဂရုမစိုက်တဲ့သူဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်သူ့ရဲ့အံ့သြစရာကောင်းတဲ့ စွမ်းရည်တွေနဲ့ ရိုးသားတဲ့စိတ်ဓာတ်က ရန်သူထက် ပရိသတ်ပိုတိုးပွားစေခဲ့ပါတယ်။ သူ့ကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့ ပင်ကိုယ်ဗီဇကြောင့်ဖြစ်မှာပါ။ ကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ဘာသာကိုယ်ပြန်တွေ့ဖို့ မျှော်လင့်တဲ့အရာတစ်ခုလိုမျိုးပေါ့။ နောက်ပိုင်းသူ့ရဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျဆင်းလာတဲ့နေရာကနေ ကမ္ဘာတစ်ဝန်းလုံးမှာ သူဟာငြိမ်းချမ်းရေးစေ့စပ်ညှိုနှိုင်းပေးတဲ့သူအဖြစ် ပိုပြီးတော့အင်အားကြီးမားလာခဲ့ပါတယ်။ သူကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးထိခိုက်ခံစားခဲ့ရတယ်လို့ ပြောဆိုခဲ့တဲ့သူတစ်ယောက် ကမ္ဘာတစ်ဝန်းလုံးက ကျန်းမာရေးမကောင်းတဲ့ကလေးသူငယ်တွေနဲ့ မသန်မစွမ်းတဲ့သူတွေဆီလည်ပတ်ခဲ့ပြီး သူတို့တွေလည်း ကြီးကျယ်အောင်မြင်တဲ့သူတွေဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတာကို ပြောဆိုခဲ့တာကို ကျွန်တော်တို့တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ မီးရှုးတန်ဆောင်သူရဲကောင်းကမ္ဘာတစ်ဝန်းလုံးကစင်တွေပေါ်မှာသူ့ရဲ့ ကြီးကျယ်အောင်မြင်တဲ့ တိုက်ပွဲဝင်ထိုးသတ်ပွဲတွေကို ကျွန်တော်တို့စောင့်ကြည့်ခဲ့ကြပါတယ်။ သူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုတိုက်ခိုက်နေတဲ့ ရောဂါနဲ့တိုက်ပွဲမှာ သူ့မျက်လုံးထဲမှာစိတ်အားတက်ကြွမှုမလျော့သွားဘူး။
မိုဟာမက်အလီဟာကမ္ဘာတစ်ခုလုံးကို ထိပ်လန့်အံ့သြစေခဲ့ပါတယ်။ မစ်ချယ်နဲ့ကျွန်တော်ဟာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ နက်ရှိုင်းတဲ့ကြေကွဲဝမ်းနည်းမှုတွေကို သူ့မိသားစုတွေဆီသ၀န်လွှာပို့ခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်ထံဆုတောင်းပေးပါတယ်။ ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံးဖိုက်တာတစ်ယောက် နောက်ဆုံးမှာတော့ငြိမ်းချမ်းစွာအနားယူခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။
source. : the white house
Muhammad Ali: Septic shock caused boxing legend’s death
Boxing legend Muhammad Ali died of “septic shock due to unspecified natural causes”, his family has said.
The three-time world heavyweight champion – one of the world’s greatest sporting figures – died on Friday night atahospital in Phoenix, Arizona.
The 74-year-old had been suffering fromarespiratory illness,acondition that was complicated by Parkinson’s disease.
“Muhammad Ali shook up the world. And the world is better for it,”said US President Barack Obama.
Hometown mourns the ‘Louisville Lip’
What are your memories of Muhammad Ali? Did you ever meet him? Share your stories and pictures. Emailhaveyoursay@bbc.co.uk